Shiinaha Jumlada 26 inji biraha baaskiilka birta ah / qiimaha wershad baaskiil buur dhaadheer loogu talagalay ragga soosaarayaasha iyo alaableyda | Beimudou
26 inch baaskiil buur bir ah / wershad qiimo jaban baaskiil buur ragga loogu talagalay
Muuqaalka ugu muhiimsan ee baaskiil buurta waa heerkiisa hore ee aadka u nuugaya fargeeto iyo jir tayo sare leh oo ka sameysan bir, aluminium ama fiber kaarboon
Jir Naqshadeynta Birta Birta ah
Fargeeto Ka joojinta birta, birta qafis
H / Baar Bir 22.2 * 31.8Mm, Baarka Liq, 580Mm
H / Jirida Daawaha Daahsoon ,, A-Madaxa, Dheeraad: 90Mm
Chainwheel Bir 42 * 36 * 26T * 165Mm.Cotterless
Baydalka PP Body W / Ball, Qafis bir ah
Taayiro & Taay 1.95 ″, Butyle, A / V
Qalabka Shimano 21Speed, Index
Wareejinta Rapidfire- Shifter
Bareeg Labada Disc -Brake Amd Alloy Lever
Kursiga Nooca Mtb W / Rail
Boosta Fadhiga 25.4 * 320Mm, W / O Qabsasho
Baaskiil buur qaabab kala duwan:
General Mountain Baaskiil (Baaskiil Buuraha Hardtail)
Baaskiil buur oo qoyan oo buuxa (Baaskiil buur jilicsan oo jilicsan)
Ujeeddada ugu horreysa ee loo rakibo nidaamka dhuujinta shoogga mootada buurta waxay ahayd in lala macaamilo saamaynta tartamada dhaadheer.
Baaskiilkii ugu dambeeyay ee naxdinta buuxda ee buuraha waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo xaalado adag oo raaxo leh, raacitaanka gaariga maalintii oo dhan dareemi maayo daal aad u daran, sidaa darteed baaskiil buuraha nuugista shoogga oo buuxa ayaa ah midka ugu raaxada badan.
Baaskiil buuro badan leh
Baaskiil Baaskiil Baaskiil badan oo ujeeddo badan leh ayaa loogu talagalay dadka jecel bushkuleetiga ee raba inay raacaan inta u dhexeysa magaalada iyo jidadka buuraha.
Marka loo eego qaybta baaskiilka buuraha, waxaa loo qaybin karaa laba qaybood: isboortiga madadaalada iyo isboortiga. Wadada hore waxay u badan tahay wadada laamiga iyo wadada ciida oo dhib yar. Isla mar ahaantaana, waxaan ku raaxeysan karnaa muuqaalka quruxda badan ee jidka lagu gaarayo ujeeddada jimicsiga iyo jir dhiska.
Wadada dambe waa dhadhan badan, xoojinta raacitaanka iyo dhererku waxay leeyihiin heer cayiman.
Cabirka iyo Qalabka:
Nooc kastaba ha ahaadee fuushashada aad doorato, waa inaad doorataa cabbirka qaabdhismeedka saxda ah oo aad si sax ah ugu habeysaa FITTING qaabka Haddii kale, xitaa haddii aad doorato qaabka ugu sarreeya iyo qaybaha, ma dabooli doono baahiyahaaga fuulitaanka xitaa wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxqabadka jirkaaga.
Gaar ahaan, waxaa lagugula talinayaa in masaafada udhaxeysa qalooca iyo kanaalka sare uu ka sarreeyo laba farood, taas oo ah xaalad ku habboon.
Hore: OEM / ODM Soo-saare Balance Baaskiil Oo Dambiil Leh - Dhammaan iibka carruurta oo raqiis ah baaskiil muddo 3 illaa 5 sano ah / 2019 carruurta iibka kulul ee baaskiiladaha - Beimudou
Xiga: 26 inji baaskiil MTB / baaskiil bir sare oo bir bir ah
Baaskiil Buuraha Hardtail
Ragga Baaskiil Baaskiil
Balance Baaskiil, Baaskiiladaha, Balance Baaskiil, Baaskiil Balance Balance, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil, Baaskiil Balance Caruurta,